Kuvundululwe inkukhu, amakhandlela namareza abegqitshiwe | News24
Kuvundululwe inkukhu, amakhandlela namareza abegqitshiwe
UMPHAKATHI waseMvutshini uthi usashaqekile ngesenzo sikamakhelwane oobize izangoma ukuba zizogqiba izinkukhu, ama-raizor namakhandlela endleleni esetshenziswa umphakathi.
UZefaniya Ndovela uthi esisegameko saqala ngoLwesihlanu laphokwabonakala khona izangoma zibethela endleleni, kwathi uma kubuzwa kumakhelwane ukuthi kwenzakalani wabatshela ukuthi bebegeza ngamazi olwandle nje kuphela.
Uthe ngoMsombuluko kwabonakala ukuthi bekumbiwe nokwenza bathathe isinqumo sokuba kumbulwe lokhu okwakugqitshiwe.
Uthe: “Ngesikhathi kumbulwa kwavele kwaphuma inkukhu egqitshiwe, amakhandlela nama-raizor esingazi ukuthi abegqitshelwani, okubuhlungu ngukuthi lezi zinto zimbelwe endleleni engihamba kuyona mina nomndeni wami,”kusho uMnuz Ndovela.
Ekhuluma nephephandaba uthe lesi isenzo esibi kakhulu njengoba sikhombisa ukuthi abahloniphani bengomakhelwane.
Ngesikhathi kumbulwa kuthiwa bekukhona nelinye ilungu lomndeni lalabo abagqiba endleleni.
“Lona obekhona akahlangene futhi uzihlangulile wathi yena ubengeyona igxenye yokuthi kugqitshwe lezi zinto kodwa ngomunye udadewabo ohlala eThekwini.”
“Ayilungile lento yokuthi umuntu esuke lapho esuka khona azosigilela imikhuba engalungile endaweni yethu
“Induna yesigodi uLanga ebuzwa ngaloludaba uthi uzifikele mathupha waya kobona lomhlola.
“Kuzomele kubekhona izinyathelo ezithathelwa lona owenze lesisenzo ngoba lokhu akwamukelekile neze, futhi kungagcina sekuxabanisa omakhelwane.
“Nathi sishaqekile impela ngalesisenzo ngoba sikhombisa okukhulu ukunga hloniphani kanye nendelelo,”kubeka induna.
Ithe loludaba luzodluliselwa komkhulu ukuze libhekwe khona bese kuthathwa izinyathelo ezifanele.